Qiimaha OnePlus 7 Pro waa la sifeeyey: laga bilaabo 749 euro | Androidsis
Qiimaha OnePlus 7 Pro waa la sifeeyey: laga bilaabo 749 euro
Qolka Ignatius | | Aaladaha Android, OnePlus
Tan iyo shalay, waan ognahay waxa taariikhda soo bandhigida rasmiga ah ee OnePlus 7 Pro, terminal in waxaa si rasmi ah loo sii deyn doonaa 14ka Maajo magaalada New YorkIn kasta oo shirkaddu ay xaflado gaar ah ku qaban doonto London, Beijing iyo Bangalore. Sida laga soo xigtay agaasimaha shirkadda OnePlus, shaashadda jiilkan cusub ayaa noqon doonta mid cajiiba.
Shaashaddu waa mid ka mid ah dhinacyada ugu xiisaha badan ee boosteejooyinka muddo sannad ka badan waana mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee adeegsadayaashu u go’aansadaan hal nooc ama mid kale. Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in OnePlus 7 Pro uu na siin doono shaashad dhan-shaasha ah, iyadoo kamaraddu ku taal qaybta kore ee terminalka oo ah qaab pop-up ah.
Sida laga soo xigtay ragga ka socda Android Central, ee marin u helay qiimaha iibka rasmiga ah ee OnePlus 7 Pro ee Yurub, waxay yeelan doontaa qiimo Waxay ku bilaaban doontaa 749 euro, koror aad u muhiim ah marka la barbardhigo moodallooyinkii hore taasina waxay dhibaato ku noqon kartaa taageerayaasha shirkadda, laakiin ma ahan dhammaan kuwa dhowaan gartay astaanta oo aad ugu faraxsan.
Qaabka 749 euro waxaa maamuli doona 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah. Nooca leh 12 GB oo keyd ah iyo 256 GB oo keyd ah waxaa lagu qiimeyn doonaa 819 euro.
Maqnaanshaha ogaanshaha qeexitaannada kama dambaysta ah ee terminal-kan cusub ee soo-saaraha OnePlus, waxaa maamuli doona shaashadda AMOLED oo ay soosaaraan Samsung iyo QHD + xallinta, waxaa maamuli doona processor-ka Qualcomm Snapdragon 855 shaashaduna waxay yeelan doontaa cusbooneysiin heerka 90Hz, xoogaa ka hooseeya. ilaa waxaan ka heli karnaa qaar ka mid ah boosteejooyinka ciyaaraha muddo ka yar sanad.
In casuumaadda dhacdo lama sheegin OnePlus 7, tusaalaha ay tahay inuu noqdo dhaxalka dabiiciga ah ee OnePlus 6T. Ma garanayno in ujeedada shirkaddu ay tahay inay ka tagto heerka caadiga ah isla markaana ay diiradda saarto wixii hadda ka dambeeya qaybta Pro.Waxaa iska cad in ilaa 14-ka May aynaan ka tagi doonin wax shaki ah.
Haddii nooc ka mid ah OnePlus 7 ugu dambeyn la sii deyn doono iyada oo aan la helin, tani waa inay ku gaarto suuqa qiimo dhan 599 euro, laakiin sida laga soo xigtay Android Central, waxaa jira suurtagal ah in nooc kale oo leh 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah la bilaabi doono, moodal lagu qiimeyn karo 699 euro sida lagu sheegay isla ishaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qiimaha OnePlus 7 Pro waa la sifeeyey: laga bilaabo 749 euro
LG wuxuu bilaabaa cusbooneysiinta LG V35 ilaa Android Pie